The qaababka cusub ee Ankai qaado xanuunka - Shiinaha Shandong New Ankai-Kitco
feature New: cusub Ankai Ankai qaado xanuun qaado xanuun sal-NC of technology shisheeye, oo ku takhasustay soo saarista-dhamaadka sare alaabta mashiinka CNC tag, rigidity sare, xasiloonida wanaagsan
1, rigidity sare: mashiinka oo dhan waa wax yar ka culus, kaas oo la soo bixitaankii dhumucda loo shubay jirka derbiga, taako ka mid ah tareenka hago, iwm ee rigidity iyo expansibility qalab mishiinka waxaa xoog, goynta culus ka sareeyaa qalab kale mashiinka , iyo waxay leedahay faa'iidooyin cad ee steel ka baaraandegidda, steel daawaha, wax bir iyo wixii la mid ah.
2, xasiloonida sare: guide iyo taako ballaarisey, jejebiyey / countershaft ugu weyn ka dib markii tusmaynta qalab dareysa, hagaajinaysaa xasiloonida ee workpiece.
3. FANUC The - taxane ah oo motor qalab firfircoon ee lateral iyo quudin motor ka sareeyaa taxane beta ah.
1) taxane Alfa yahay motor ugu sareeya FANUC, iyo sax, waxqabadka iyo nolol ka fiican yihiin taxane beta ah.
2) ma jiraan wax la ogaado heerkulka ee motor taxane beta ah. The motor iyo nidaamka lagu dhaawacmi doona marka heerkulka of motor si joogto ah u kordhiyaa marka load waa joogto ama load waa ballaadhan yahay.
3) our usheeda dhexe ugu weyn, kordhiyo Howlsocodsiinta isticmaalaya taxane Alfa (FANUC, iyadoo ugu sarreeya) iyo dunmiiqa, kordhiyo transverse waa kala dildillaaceen, beta taxane sida kordhiyo dhaqaale nooca, qiimaha waa ka hooseeyaa taxane Alfa ah, iyo usheeda dhexe ugu weyn, kordhiyo transverse waa nooc muhiim ah, in dayactirka ka soo daahay oo bedelkiisa oo dhan kharashka bedelka iyo dayactirka waa in ay ka badan tahay taxane beta shirkadda waxaa lagu qalabeeyay SM205 motor Alfa ah. Xuddunta The of motor Alfa ah, sax ah ee jawaab-celin, xallinta encoder ah, oo la ogaado hadda jira wax badan ka xoog badan motor beta ah.
4, xawaaraha sare, sax sare iyo oolnimada sare: Qaabka ugu fiican qalab gacanta ku xawaaraha sare ee hawlgalka xisaabta, si markii qalab beddelo waa gaaban iyo meesha ugu fiican waa la gaari waqti isku mid ah, iyo waqtiga kaabayaal ah u yareeyaan gaaban ah.
5, qaabeynta sare: qaybta ugu xoog functional, dhidibka multi qaabeynta qalab hodan, iyo qalab awood caadiga ah, kaas oo si weyn ay ballaarisey baaxadda processing iyo kulmay machining adag ee qaybo ka mid adag.
6, meel hawlgalka haboon: meel hawlgalka ku haboon, fududahay in la beddelo mindi, qalab, midhona kor taagan heli kartaa chip ugu fiican.
7, dabacsanaan sare: waxa lagu xaqiijin karaa leh ama aan lahayn guide interchangeability bushing, qalab awood in lagu qalabeeyaa karaa axdi qarameedka deg deg isbedel thread dabaysha cirwareenta ah, oo madax ka awood, magaabay wiil VDI, Faydi chip, ururiyaha ceeryaamo saliid, wheel extrusion silig, bamka cadaadis sare oo kale qalabka.